အပူခံငါးပိ: ဘာလဲ၊ အမျိုးအစားများ၊ အသုံးပြုနည်း... | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
ဣဇာက်သည် | 15/11/2021 11:38 | အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ
La အပူငါးပိ တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်လောက. ယေဘူယျအားဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော စီမံဆောင်ရွက်ပေးသော ချစ်ပ်များနှင့် အပူရှိန်များကြားတွင် အပူပြန့်ပွားမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ကြားခံအဖြစ်။ သို့သော် ၎င်းကိုအသုံးပြုသည့် တစ်ခုတည်းသောနေရာမဟုတ်သော်လည်း ပါဝါမြင့်သော ထရန်စစ္စတာများအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ peltier အကျိုးသက်ရောက်မှုပြားများ, etc
ဤဆောင်းပါး၌သင်သိလိမ့်မည်။ ဒီပစ္စည်းက ဘာလဲ၊ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်၊ ၎င်းကို ကောင်းစွာအသုံးချပုံ၊ စျေးကွက်တွင်ရှိသော အမျိုးအစားများနှင့် သင်ဝယ်ယူနိုင်သော အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များ။
နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ခေါ်နိုင်သည်။ အပူကပ်ခြင်း၊ အပူဆီလီကွန်၊ အပူအမဲဆီစသည်တို့ ဤအသုံးအနှုန်းများအားလုံးသည် အဓိပ္ပါယ်တူပြီး ၎င်းတို့ကြားတွင် ကွာခြားချက်မရှိပါ။ မျက်နှာပြင်နှစ်ခုကြားရှိ မျက်နှာပြင်နှစ်ခုကြားရှိ မျက်နှာပြင်နှစ်ခုကြားရှိ မျက်နှာပြင်နှစ်ခုကြားရှိ အပူကို စုပ်ယူရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကူညီပေးရန်အတွက် ကောင်းသောအပူစီးကူးနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများရှိသော အရာအား ရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မျက်နှာပြင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားရှိ "ကွက်လပ်" ကိုဖြည့်ရန်၊ ချစ်ပ်တစ်ခုပေါ်တွင် heatsink ကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ ထို့ကြောင့် conduction ကိုပိုမိုထိရောက်စေသည်။
အပူခံငါးပိတွင် မတူညီသောဒြပ်စင်များပါရှိသည်။ ဖွဲ့စည်းမှု:
Polymerizable အရည် matrix: ၎င်းသည် ငါးပိ၏ အခြေခံဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အရည်ဖြစ်စေသော အရာဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ဤဂျယ် သို့မဟုတ် ငါးပိအမျိုးအစားများသည် အများအားဖြင့် ဆီလီကွန်များ (၎င်းတို့၏အမည်)၊ epoxy resins၊ acrylates၊ urethanes စသည်တို့ကို အခြေခံထားပြီး ၎င်းတို့ကို paste ပုံစံအစား ကော် သို့မဟုတ် pads များဖြင့်ပင် စီစဉ်နိုင်သည်။
အမှုန်: ဤဖြည့်စွက်စာများသည် အများအားဖြင့် အပူကူးထည့်ခြင်း၏ 70 နှင့် 80% ကြားကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ၎င်းတို့သည် ကြေးနီ၊ အလူမီနီယမ်၊ ငွေ၊ ဇင့်အောက်ဆိုဒ်၊ ဘိုရွန်နိုက်ထရိတ်၊ စသည်တို့ကဲ့သို့ အလွန်ကွဲပြားနိုင်သည်။
ဤဖွဲ့စည်းမှုအားလုံးကြောင့်, ဤအပူငါးပိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မျိုချရင် အဆိပ်သင့်တယ်။. ထို့ကြောင့် အသုံးပြုရာတွင် သတိထားရမည့်အချက်မှာ လက်အိတ်မပါဘဲ ကိုင်တွယ်ပါက လက်ကိုဆေးကြောပြီး ကလေးငယ်များ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် မထားမိစေရန် သတိထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အရေပြား၊ မျက်လုံးနှင့် အကျိအချွဲအမြှေးပါးများကိုလည်း ယားယံစေသောကြောင့် ကိုင်တွယ်ရာတွင် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသင့်သည်။ အချို့သော ဗီဒီယို သင်ခန်းစာများက ၎င်းကို လက်ဖြင့်ပင် အသုံးချပုံကို ပြသသော်လည်း ၎င်းကို မလုပ်သင့်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းအသစ်တစ်ခု၏ ရှေ့တွင်ရှိနေ၍ ၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အပူကပ်ခြင်းကို သုံးနိုင်လျှင် သို့မဟုတ် မည်သည့်အရာကို အသုံးပြုရမည်ကို ကောင်းစွာမသိပါက၊ အမြဲဖတ်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူဒေတာစာရွက်များ. ဤစာရွက်စာတမ်းတွင်၊ စုပ်ယူနိုင်သော လိုအပ်ချက်များ၊ ပါဝါ၊ အမြင့်ဆုံးနှင့် အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်များ၊ junction-case၊ junction-air ကဲ့သို့သော တန်ဖိုးများအပြင် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။
အပူခံငါးပိ မပါရှိပါ။ ဂုဏ်သတ္တိများ အပူလျှပ်ကူးနိုင်မှု၏အခြားအရာများနှင့်၎င်းတို့အားအထူးသတိထားရန်လိုအပ်ပါသည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်အီလက်ထရွန်းနစ်ဒြပ်စင်များအလိုက်အသုံးပြုမှုကိုအခြေအနေသတ်မှတ်နိုင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအထူးသတိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤအရာသည် အဓိကအားဖြင့် လက္ခဏာရပ်ဖြစ်သည်-
အပူလျှပ်ကူးမှု- အပူကို ပြေပျောက်စေရန် ရည်ရွယ်သော အရာဖြစ်သောကြောင့် အပူငါးပိတွင် အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ ဤအချက်ကိုတိုင်းတာရန် watt per meter-Kelvin ကဲ့သို့သော ယူနစ်များကို အသုံးပြုသည်။ ခေါက်ဆွဲအမျိုးအစား သို့မဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်မူတည်၍ ဤလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းသည် များစွာကွာခြားနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကြေးနီ၊ ငွေ၊ စိန် သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ်တို့သည် ဤကိစ္စရပ်တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီး အခြားအရာများဖြစ်သည့် ဇင့်အောက်ဆိုဒ်၊ အလူမီနီယမ်နိုက်ထရိတ်၊
လျှပ်စစ်စီးကူးမှု: ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကောင်းမွန်စွာ သယ်ဆောင်သွားပါက အပူလွန်ကဲမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ပြဿနာများထဲမှ တစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ခေါက်ဆွဲထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်တင်ပြသည့် လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည်ကို ပြသလေ့ရှိကြသည်။ (ohms per centimeter) ပိုမြင့်လေ၊ insulator က ပိုကောင်းလေမို့၊ ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ အကယ်၍ paste သည် ခံနိုင်ရည်နည်းပြီး ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက၊ ၎င်းသည် အချို့သော လမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် ပင်များနှင့် ထိတွေ့မိပါက ဝါယာရှော့ပြဿနာများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။
Thermic dilatation coefficient: အာရုံစိုက်ရန် အခြားယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ဖြစ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံး coefficient ဖြစ်သော paste ကိုရှာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် အပူဖြင့် ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းအောင် ချဲ့ထားရန်ဖြစ်သည်။ မဟုတ်ပါက၊ ၎င်းသည် အစိတ်အပိုင်းများကြား တင်းမာမှုပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
စျေးကွက်တွင်အပူငါးပိအမျိုးအစားများစွာရှိပြီး၊ ကိစ္စတစ်ခုစီတွင်မည်သည်ကိုရွေးချယ်ရမည်ကိုသိရန်ရရှိနိုင်သည့်ဖြေရှင်းချက်အားလုံးအကြားခွဲခြားရန်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းတို့အားလုံးတွင်၎င်းတို့ရှိသောကြောင့်၊ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို:
အပူခံပြား: ၎င်းသည် အပူလျှပ်ကူးနိုင်သော မျက်နှာပြင်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် ကော် သို့မဟုတ် ပတ်ဒ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အပူကူးထည့်ခြင်းကဲ့သို့ အတိအကျတူညီသော်လည်း ၎င်းကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပမာဏကို ထိန်းချုပ်ခြင်းလည်း မပါဝင်ပါ၊ ၎င်းကို တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် ချဲ့ထွင်ခြင်း စသည်ဖြင့် သေချာစေခြင်း၊ ပျောက်ကွယ်သွားမည့် အစိတ်အပိုင်း၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သို့မဟုတ် heatsink ပေါ်တွင် ကပ်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူစေရန်အတွက် အချို့သောရေခဲသေတ္တာစနစ်များတွင် ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော်လည်း ၎င်းတို့ကို သီးခြားစီရောင်းချပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ယေဘုယျအားဖြင့် ဆီလီကွန် သို့မဟုတ် paraffin ဖယောင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အစိုင်အခဲလျှပ်ကူးနိုင်သော အမှုန်အမွှားများနှင့် ရောစပ်ထားသည်။ အခန်းအပူချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် ပိုမိုခိုင်မာပုံပေါ်သော်လည်း ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်သည့်အခါတွင် ၎င်းတို့သည် ပို၍အရည်ကြည်များလာသည်။
အပူငါးပိ: သည် လွယ်ကူစွာ လိမ်းရန်အတွက် အပလီကေးရှင်း ဘရက်ရှ်၊ ပြွန် သို့မဟုတ် ဆေးပြွန်များဖြင့် ဗူးများတွင် ရောင်းချသော အရည်ပျစ်သော အရာဖြစ်သည်။ ဤ paste တွင် အောက်ပါအမျိုးအစားများကို သင်တွေ့နိုင်သည်။
သတ္တု၏: ၎င်းတို့သည် သတ္တုအမှုန်အမွှားများ (ဇင့်၊ ကြေးနီ၊ အလူမီနီယမ်၊ ငွေ၊ ရွှေ ...) ကို အသုံးပြုကြပြီး ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် မီးခိုးရောင်ရှိသည်။ သူတို့က အရမ်းနာမည်ကြီးပြီး ဈေးလည်းမကြီးဘူး။ ၎င်းတို့သည် အပူစီးကူးနိုင်မှု သတ်မှတ်ချက်အရ ကောင်းစွာပြုမူကြပြီး အချို့ကိစ္စများတွင် အပူချိန် 6ºC အထိ လျှော့ချနိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့တွင် ပြဿနာတစ်ခုရှိပြီး ယင်းမှာ ၎င်းတို့၏ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းဖြစ်သည်။ သတ္တုအမှုန်အမွှားများပါရှိသောကြောင့် ယိုစိမ့်ပါက အဆက်အသွယ်များကြားတွင် တိုတောင်းနိုင်သည်။
ကြွေထည်: အဖြည့်ခံအမှုန်များသည် ကြွေထည် (ဇင့်အောက်ဆိုဒ်၊ ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ အလူမီနီယံအောက်ဆိုဒ်၊ ...) ၊ မီးခိုးရောင် သို့မဟုတ် အဖြူရောင် အရောင်များ ပေးသည်။ ဤအပူဆီလီကွန်များ၏ ခိုင်ခံ့သောအချက်မှာ ၎င်းတို့သည် အလွန်စျေးပေါပြီး လျှပ်စစ်စီးကူးမှုနည်းသောကြောင့် ယိုစိမ့်သည့်အခါတွင် ပိုမိုလုံခြုံပါသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းတို့၏အပူစီးကူးနိုင်စွမ်းသည် ပိုဆိုးသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ၎င်းကိုအသုံးမပြုသော interface နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပူချိန် 1 မှ 3ºC ကိုသာ လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကာဗွန်: ၎င်းတို့သည် ပိုစျေးကြီးပြီး အသစ်ဖြစ်သော်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ယေဘုယျအားဖြင့် overclocked ချစ်ပ်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် သို့မဟုတ် ပါဝါမြင့်သည့်ကိရိယာများ စသည်တို့ကဲ့သို့သော ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူကို စွန့်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည့် စနစ်များအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် စိန်မှုန့်၊ ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ် အစရှိသည့် အမှုန်များကို အခြေခံထားသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ တစ်ဖက်တွင် သတ္တုကဲ့သို့ အပူစီးကူးနိုင်မှု အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင် ကြွေထည်များကဲ့သို့ လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်မှု အလွန်နည်းပါးသောကြောင့် ဂုဏ်သတ္တိများ ပြီးပြည့်စုံလုနီးပါးဖြစ်သည်။
သတ္တုအရည်: ၎င်းတို့သည် သာမန်မဟုတ်သော်လည်း အချို့သော ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ဝါသနာရှင်များက စီမံဆောင်ရွက်သည့် ယူနစ်များ စသည်တို့၏ heatsink တုံးများကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် သတ္တုကိုအခြေခံသည့်အရာများထက် အနည်းငယ်ပိုကောင်းသော်လည်း၊ ဤအခြားအမျိုးအစားသည် အများအားဖြင့် ဈေးကြီးပြီး အင်ဒီယမ် သို့မဟုတ် ဂါလီယမ်ကဲ့သို့ သတ္တုများကို အသုံးပြုသောကြောင့် အလူမီနီယံအပူရှိန်များနှင့် တုံ့ပြန်နိုင်သည်။
Hybrids: အချို့သော ပေါင်းစပ် အပူပေး paste များလည်း ရှိပါတယ်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် ဂုဏ်သတ္တိများ တိုးတက်စေရန် အခြေခံအဖြစ် မတူညီသော အဖြည့်ခံ အစိတ်အပိုင်းများကို ရောနှောပါသည်။
အပူခံငါးပိ ထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ရွေးချယ်မှုများ စျေးကွက်ထဲမှာ သင်တွေ့နေရတဲ့အရာ
အပူခံအပြားများ သို့မဟုတ် အဖုံးများ- ADWITS
စပ်စပ်အပူပေးသည့်ဆေး- Noctua NT-H1
သတ္တု၏ Artic Silver ၅
ကာဗွန်အခြေခံ- Cooler Master MasterGel Maker
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ » အပူခံငါးပိ- အဲဒါက ဘာလဲ၊ အမျိုးအစား၊ ဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲ...